Kunwa wekugovera mvura → Imba • Apartment • Zvivakwa Warsaw
UV mwenje mwenje yekuchenesa mvura
Iwe unoda muto wemvura kumba here? Iyo kambani yeWater Point inopa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura, vanonwa doro, iko kunobva vatungamiriri venyika muindasitiri, yatagovera ndega muPoland.
Dom ndiyo nzvimbo yatinoshandisa yakawanda yenguva yedu. Tinoda kunzwa zvakanaka uye takachengeteka pano. Izvozvi pano kuti isu tinogadzira chikafu, zororo uye kazhinji zvakare kushanda. Mazuva ese pamba, pamwe nemhuri uye neshamwari, tinonwa magirazi mazhinji emvura. Saka isu tinotarisira mvuraisu tinoshandisa yaive yakachena uye iine hutano uye yaive nerevo yakasarudzika. Iyo nyaradzo uye nyore kwekuwana mvura yakadaro zvichapihwa kwatiri imba yekumwa yekunwa mvura.
Kugara kuwanikwa kwemvura yakachena kubva kune iyo dispenser, isina hutachiona uye chemakemikari kusvibiswa, kunotitendera kugara takagwinya kwenguva yakareba uye nekuwedzera kuchengetedza nharaunda yedu nekudzora huwandu hwemarara, i.e. inoshandiswa uye yakaraswa mabhodhoro emvura.
Iyo inoshanda uye yemazuva ano yekumwa mvura yekugezesa iye zvino yakakosha mudzimba uye inoita chaizvo hupenyu, nekuti hapana chikonzero chekutenga mvura yemabhodhoro wobva wapedzera simba pavari. Kuderedza huwandu hwetsvina inogadzirwa mumba medu zvakare chinhu chakakosha chekutarisira nharaunda yakasikwa.
Kunwa nguva dzose kwemvura yakachena uye yakachena kunovandudza hutano hwedu uye kunovandudza maitiro akakodzera ekudyira munhengo dzemhuri diki.
Nekuda kweiyo yekunwa mvura disenser, iwe haugone kugadzirira kwete inonaka mvura chete, asiwo inozorodza lemade kana inopenya mvura, uye dhizaini remazuva ano remushini rinosimbisa kutaridzika kweimwe kamuri.
Hydration yemuviri inovandudza kuramba kwemuviri kuzvirwere, kusanganisira hutachiona hutachiona, nekuti zvakanyoroveswa mucous membranes dzemaziso, mhino nemuromo zvinoumba chibvumirano chinoshanda chehutachiona hwehutachiona huri kutirwisa. Kunwa zvine hutano uye hwakachena mvura zvakare kune zvakakonzeresa pakuonekwa kweganda redu uye kunonoka kuita kwekuchembera pamwe nekuonekwa kwemakonzo. Hydrate yakakodzera yemuviri inokanganisa ganda rakakodzera elasticity, iyo inodzivirira muviri wedu nenzira yakasikwa.
Mvura iri mumuviri wedu ndeiyi:
-Solvent yezvinhu zvinovaka muviri zvinopihwa muviri wedu pamwe chete nechikafu
- chinhu icho chiri chikamu chematehwe edu
-regator yekushanda kwakakodzera kwemitezo, kusanganisira uropi
- muviri kupisa muridzi
Uine izvi mupfungwa, yeuka kunwa anenge maviri malita emvura pazuva. Izvo zvinonyanya kukosha kune vanhu vari kutora mishonga uye vanotambura nemamiriro akasiyana ekurapa.
Kune rimwe divi, kudikanwa kwemvura kwevacheche nevana vadiki kwakatokura. Vana vanofanirwa kumwa yakachena, yakaderera-mineralized mvura isina shuga, flavorings uye dhayi.
Izvi ndizvo zvikonzero nei uchifanira kufunga nezvekutenga mvura inonwa disenser yeimba yako kana furati, sezvo ichivimbisa kugara uchiwanikwa kune yakachena uye nehutano mvura. Icho chichava chinhu chinonyanya kushanda chinhu chekicheni michina.
Kunwa mvura vanogadzirisa vanobvumira kugadzirira kwakanaka kwekudya uye zvinwiwa zvemhuri yese. Aya madivayiri achashandiswa nyore uye nekunakirwa nemunhu wese, kunyangwe mudiki wemhuri nhengo, nekuti iwo anoratidzwa nekushanda uye kusimba.
5 / 5 ( 17 mavhoti )
non-cylinder mvura inogadzira mvuramvura inopisa yemumba mune imwe-yemhuri imbamvura inopisa mumbayakachena pombi mvuramvura yemahara kumbaimba yekupa mvuramudzimba mvura disensermuto wemvura dhizaundikudzimba mvura disenser wongororomvura inogovera kumba Warsawkabhoni yakadhirowa mvura inogovera imbakabhoni yakadhirowa mvura inogovera kumba Warsawmudzimba mvura disensermvura inowanika mufuratiimba yekumwa inonwiwa mvuramatsime emvura mvurakabhoni mvurakabhoni mvura kumbamvura inopisamaneja emvura kumbamvura inogovera chii imbamvura nyoro kumbakubva paipimvura yakaoma mumbazvako mvura kumbamvura kuenda kuimbamvura inotsemuka kumbamvura yemaminerari kumbakumwa mvura kumbaflavored mvura kumbasoda mvura kumbamvura mumbamvura mune yekuisa imbabasement mvura mune imwe imba nyowanimvura ine hutano kumbautano mvura pombimvura inotonhorachitubu mvura kumba
Ona mamwe mapoka:
Mapaki uye nzvimbo dzemitambo
TEL. +48 502 091 710 EMAIL: office@waterpoint.pl
Kodhi yemvura Copyright © 2020
Kodzero dzese dzakachengetedzwa
Dhizaini uye kuita: pixelsperfect.pl - Website Poznań